Ciidamo Soomaali ah oo saraakiil Qadar u dhalatay ku tababaraya dalka Turkiga - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Jan 14, 2022
Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa tallaabo aan caadi ahayn oo isniintii lasoo dhaafay waxa ay barteeda Twitter-ka ku soo bandhigtay sawirada saraakiil ka tirsan dowladda Qatar oo Turkiga ku tababaraya ciidamo Soomaali ah.
Sida lagu daabacay Nordic Monitor Wasaaradda oo aan soo bandhigin sababta keentay in Turkiga tababaro ciidan ay siiyeen dad u dhashay dalka Qatar, waxa ay wasaaraddu sheegtay in 350 askari oo ka tirsan ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ay tababar ku qaateen Xarunta Tababarka iyo La-dagaalanka Argagixisada ee Galbeedka magaalada Isparta.
Turkiga iyo Qatar ayaa Soomaaliya ku sameeyay maalgashi la taaban karo, waxaana labadan dal ee isbaheysiga ah ay si wadajir ah uga hawlgaleen dhanka milateriga iyo siyaasadda dalka.
Halka Turkiga uu Soomaaliya ka taageero dhanka militariga, Qatar waxa ay maalgelisaa cutubyada sirdoonka.
Intii lagu jiray xiisadda siyaasadeed ee bishii May, Turkiga iyo Qatar ayaa taageeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) oo ku dhawaaqay inuu muddo labo sano ah ku kordhiyay waqtigiisa, isagoo dib u dhigay doorashada.
Go’aankan ayaa waxaa ka dhashay iska hor imaadyo ka dhacay waddooyin, taasoo ka careysiisay mucaaradka.
Waxaa la sheegay in cutubyo ka tirsan milateriga uu Turkigu u tababaray la dagaalanka ururka Islaamiga ah ee Al-Shabaab sidoo kale loo adeegsaday faragelin ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ay ku sameeyeen mucaaradka.
Inkastoo Farmaajo uu ku dhawaaqay in doorashada ay dib u dhacayso, haddana ballan-qaadkaasi weli ma fulin. Madaxda Soomaalida ayaa todobaadkii hore isku raacay in doorashada lagu soo gabagabeeyo 25-ka bisha Febraayo.
Turkigu waxa uu u arkaa ciidanka Soomaaliya kuwa dammaanad qaadaya joogitaankooda dalka Afrikaanta waxana ay sii wadaan kaalmadooda iyagoo ku deeqaya qalab ciidan iyo tababaro ciidan.
Iyada oo loo marayo saldhigga tababarka milatariga iyo iskaashiga warshadaha difaaca, Turkigu wuxuu higsanayaa inuu ballaariyo saameyntiisa siyaasadeed iyo ku lug lahaanshiyaha milatari ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Ka dib bixitaanka ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) December 2021, Turkigu wuxuu noqonayaa qodobka ugu muhiimsan ee qaabeynta ciidamada Soomaaliya.
La taliyeyaasha Madaxweynaha ee Arrimaha Sharciga,Dhaqaalaha…
Xasan Sheekh oo uga mahadceliyay Dowlada Imaaraadka Deeqda…
Turkiga ayaa xiriir adag la sameynayay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011-kii, xilligaasi oo uu bilaabay in uu dalka gaarsiiyo gargaar bini’aadinimo si wax looga qabto macluusha.
Turkiga ayaa isku dayay inuu kordhiyo saameyntiisa isagoo bilaabay mashaariic horumarineed, furitaan iskuulo iyo tababarida askarta Soomaaliya taasoo qeyb ka ah dadaallada lagu dhisayo ciidamada xoogga dalka ee burburay.
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxa ay saldhig ciidan ka dhisatay caasimadda, waxaana shirkado xiriir la leh madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ay maamulaan labada garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho iyo dekedda.
Khubarada qaar ayaa sheegay in iskaashiga tamarta iyo macdanta MOU ee la saxiixay 2016 uu u furi doono biyaha xeebaha Soomaaliya maraakiibta qodista ee Turkiga iyo kooxda tamarta ee Madaxweyne Erdogan.
Sida lagu sheegay warbixinta MASAK, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga waxay MASAK u dirtay warqad lambarkeedu yahay 48378 bishii March 22, 2013, iyadoo ku lifaaqan codsi xog ah oo uu soo diray Xafiiska Hanti-dhowrka Mareykanka ee argagixisada iyo sirdoonka maaliyadeed, oo uu hoggaaminayo ku-xigeenka Xoghayaha David S. Cohen waqti.
Sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in ninka u dhashay dalka Turkiga ee Ibrahim Şen iyo walaalkii Abdulkadir Sheen ay ku lug lahaayeen 600,000 oo dollar oo ay Al-Shabab u geeyeen intii u dhaxaysay September iyo December 2012. Maamulka Turkiga ayaa ka aamusay baadhista walaalaha Şen.
Dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Erdogan ay go’aansatey in ay Soomaaliya ugu deeqdo lacag dhan 30 milyan oo doollar taasoo waafaqsan heshiiskii caalamiga ahaa ee ay labada dal kala saxiixdeen bishii July. Lacagtan ayaa loo isticmaali doonaa maalgelinta miisaaniyadda Soomaaliya iyo tayaynta hay’adaha dowladda.
Sannadkii hore, dawladda Turkiga ayaa bixisay qayb ka mid ah deynta Soomaaliya lagu leeyahay hay’adda lacagta adduunka (IMF) iyadoo laga jaray ilaa 11.9 Xuquuqda Sawirka Gaarka ah oo ay IMF-tu ku celisay Turkiga 25-kii March si ay ugu magdhabaan dakhligii khasaaraha ka soo gaadhay sanduuqaasi oo aan shaqaynayn. risiidhka dulsaarka iyo Xisaabta lama filaanka ah ee gaarka ah.
Mahad 4825 posts
Tunisia loses protests against the Africa Cup of Nations match which ended prematurely
La taliyeyaasha Madaxweynaha ee Arrimaha Sharciga,Dhaqaalaha iyo Siyaasadda oo la…
Xasan Sheekh oo uga mahadceliyay Dowlada Imaaraadka Deeqda Lacagta 9.6 Milyan Doolar
Golaha Wasiirada oo ansixiyey miisaaniyadda iyo magacaabidda Agaasimaha Nabad-sugidda
Mahad Maxamed Salaad oo loo magacaabay taliyaha Nabadsugida